Daniely 1 - Ny Baiboly
Daniely toko 1
3Nanome teny an'i Asfeneza, lehiben'ny eonokany, ny mpanjaka, hitondra ny sasantsasany amin'ny zanak'Israely izay isan'ny taranak'andriana, na izay avo razana, 4ny zatovo tsy misy kilema, tsara tarehy, manana talenta isan-karazany, nandia fianarana sy manan-tsaina, ary matanjaka tsara, hitoetra ao an-dapan'ny mpanjaka, sady hampianarina taratasy aman-teny Kaldeana. 5Natokan'ny mpanjaka izay anjara ho azy ireo isan'andro, amin'ny hanin'ny mpanjaka sy ny divay fisotrony, mba hitoerany eo anatrehan'ny mpanjaka, rahefa nobeazina telo taona izy ireo. 6Anisan'ireo: Daniely, Ananiasa, Misaely ary Azariasa, avy amin'ny taranak'i Jodà. 7Nomen'ny lehiben'ny eonoka anarana izy ireo: ka Daniely nataony hoe Baltasara, Ananiasa nataony hoe Sidraka, Misaely nataony hoe Misaka, ary Azariasa nataony hoe Abdenagao.
17Ireo zatovo ireo, dia izy efa-dahy, samy nomen'Andriamanitra fahalalana amam-pahaizana momba ny taratasy amam-pahendrena rehetra; ary Daniely nahafantatra ny nofy amam-pahitana rehetra. 18Nony tonga ny fotoana voatendrin'ny mpanjaka hampidirana azy rehetra, dia nentin'ny lehiben'ny eonoka ho eo anatrehan'i Nabokodonozora izy ireo. 19Niresaka tamin'izy rehetra ny mpanjaka, ary izy rehetra dia tsy nisy tahaka an'i Daniely, Ananiasa, Misaely ary Azariasa, ka dia noraisina hanao ny fanompoana ny mpanjaka izy ireo. 20Tamin'ny zavatra rehetra ilam-pahalalana, nanontanian'ny mpanjaka azy ireo, dia hitany fa nanatombo impolo heny noho ny an'ny mpahay taratasy amam-pisikidy rehetra, teo amin'ny fanjakany manontolo, ny fahambonian'izy ireo. 21Toy izany Daniely hatramin'ny taona voalohany nanjakan'i Sirosy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1940 seconds